Safaaradda Itoobiya oo ka hadashay howlgalka ciidamadoodu ka bilaabeen Soomaaliya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
7th March 2014 A warsame Af Soomaali 0
Muqdisho – Mareeg.com: Safaraadda Itoobiya ku leedahay magaalada Muqdisho ayaa ka hadashay howlgallo milateri oo ciidamada dalkaasi ka bilaabeen Soomaaliya, gaar ahaan gobollada koonfurta iyo bartamaha.
Jamaaludiin Mustafa Cumar oo ah danjire ku xigeenka safaaradda Itoobiya ku leedahay Muqdisho ayaa cadeeyey in ciidamada Itoobiya ee ku biiray AMISOM ay weeraro ka dhan ah Alshabaab ka bilaabeen gobolka Bakool, islamarkaana ay ku dhowyihiin magaalada Xudur ee ah xarrunta gobolka Bakool.
Jamaaludiin Mustafa Cumar oo la hadlay VOA ayaa sheegay iney maalmaha soo socda weeraro ku qaadi doonaan degmooyin ka tirsan saddexda gobol ee kala ah: Galgaduud, Hiiraan iyo Gedo.
Wuxuu sheegay sarkaalkaan ka tirsan safaaradda Itoobiya ee Muqdisho in gobolka Galgaduud ay ku wajahan yihiin degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud, halka sidoo kale ay ku wajahn yihiin degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan.
Jamaaludiin ayaa sidoo kale xusay in ciidamada Itoobiya maalmaha soo socda ku socdaan degmada Baardheere ee gobolka Gedo.
Mar Jamaaludiin oo wax laga weydiiyey warar sheegaya in Alshabaab dib ula wareegeen degmada Rabdhuure ee gobolka Bakool kadib markii ciidamadu u gudbeen dhanka Xudur, ayuu sheegay in Rabdhuure marin u aheyd ciidamada Itoobiya, islamarkaana aaney qorshaha ku jirin in ciidamadu degaan.
Wuxuu sheegay inuusan ka warheyn cidda haataan gacanta ku heysa degmada Rabdhuure, wuxuuna tilmaamay in shalay iyo saaka ay mareen ciidamada Itoobiya oo ku jeeday Xudur, islamarkaana aysan halkaas ku arkin rag ka tirsan Alshabaab.
Jamaaludiin Mustafa Cumar ayaa tilmaamay iney doonayaan iney gacanta ku dhigaan magaalooyinka Xudur iyo Waajid, halkaasoo Alshabaab maamulaan, wuxuuna xusay iney ku hormarayaan Xudur.
Ciidamada Itoobiya oo kumanaan ah ayaa magaca AMISOM dhawaan kusoo galay Soomaaliya, waxeyna dagaallo ka bilaabeen gobolka Bakool, iyagoo gacanta ku haya magaalada ugu weyn ee Baay ee Baydhabo.
Maamulka Puntland oo dejinaya qoshe howleedka shanta sano ee soo socota